Car Emergency Hammer, Door sensor Alarm, hoggaamiyo Toosh Shuclada - Ariza
Shenzhen Ariza Electronic Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2009 oo ay warshad waa in Shenzhen. With10 sano ee horumarinta, ka OEM in ODM, waxaan fiiro iyo aad u badan horumarka waxyaabaha cusub, loogu talagalay lagu daydo oo caan ah oo kala duwan leh sifooyinka Ariza iyo leedahay shatiyada ah, dhamaan noocyada kuwan waxaa sare ansixiyeen macaamiisheena in dal kasta. Muhiimsan, waxaan ka diiwaan gashan our Ariza brand u gaar ah, BELL TAMA ee USA, Japan iyo Shiinaha si guul leh.
BSCI (Commercial Standards Social Certification) - Magaca buuxa ee Business Social Compliance Initiative ah, BSCI waa hindise ee Ururka Masuuliyada Business Compliance bulshada. Compliance Ururka The Business ( "BSCI") ujeedadeedu tahay in ay fuliso set midaysan nidaamka yihiin in lala socdo iyada oo loo marayo horumar joogto ah siyaasadaha horumarinta. Iyo waxqabadka mas'uuliyadda bulshada ka mid ah shirkadaha in kor loogu qaado wax soo saarka ee badeecadaha la xiriira.
Ariza waxaa ka go'an in ay sii tayada sare ee alaabta iyo adeegyada ay bixiyaan qumman iyo xal, in had iyo jeer ay awoodaan in ay la kulmaan baahida macaamiisha ah ee. Qeybinayay adeeg dheeraad ah oo ku haboon, Ariza ayaa soo bandhigay noocyo kala duwan oo B2B iyo iibka B2C hab cusub. Iyada oo hal-abuurnimo Joogta iyo dabagalka oo kaamil ah, Ariza ayaa leedahay Management System xirfadeed Tayada tan iyo markii la aasaasay. Waxaan si guul helay shahaadada BSCI ISO9001 CE RoHS FCC SGS.